Promotion Archives - Sule Square
Sule Square Mall မှာ ရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ကျပ်- ၁၅,၀၀၀ ဖိုး စားရုံနဲ့
(ကျပ် ၅,၀၀၀/ ၁၀,၀၀၀/ ၂၀,၀၀၀ တန်)
ဗလာမပါ ငွေသားကံစမ်းမဲများ ရယူလိုက်ပါ
ဒါ့အပြင် ညနေ(၄)နာရီနောက်ပိုင်း ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲမှာပဲ ကျပ်- ၁၅,၀၀၀ ဖိုး ပြည့်အောင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ မိမိစားနေတဲ့ဆိုင်က လက်ဆောင်ပေးမယ့် Free Tasty Menu တွေလဲစားရမယ့်အပြင် ဗလာမပါငွေသားကံစမ်းမဲကလဲရဦးမယ်
၁၅,၀၀၀ ဖိုးထဲစားရုံနဲ့ FREE နှစ်ခုတောင်ထပ်ရမယ့် Double Up အစီအစဉ်ဆိုတော့ ပျော်မှပျော်
(*ကျပ်- ၁၅,၀၀၀ ပြည့်ရန် မတူညီသောဆိုင်များတွင်စားထားသော receipt voucher များကိုလဲ (၂) စောင်ပေါင်း၍ကံစမ်းနိုင်ပါသည်)
Sule Square Mall Atrium (ပရိုမိုးရှင်း ဧရိယာ)မှာ
“Eat Up, Double Up” Sule Square Food Fair ကို
စက်တင်ဘာလ (၃)ရက်နေ့မှ (၇)ရက်နေ့ထိ ကျင်းပမှာဖြစ်လို့ ဆက်ဆက်လာရောက်ဆင်နွှဲဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်…
*first come-first serve, terms & conditions apply
Get your appetite ready for an amazing food experience at Sule Square Mall.
Spend MMK 15,000 on the same day (maximum TWO receipts can combine) and get Sure-Win lucky draw gift voucher.
Double the Fun when you dine after 4.00 p.m., spend minimum of MMK 15,000 and above at ONE F&B shop, enjoyafree dish or drink plus Sure-Win lucky draw gift voucher.
(promo runs from 3rd to 7th September, 2018)
#SuleSquareMallOffice #SuleShangrila #Yangon #Myanmar
INNI Skincare ရဲ့  All Item 20% Promotion
INNI Skincare ရဲ့  All Item 20% Promotion ကြီးနဲ့အတူ တမူထူးခြားတဲ့ Promotion လေးတွေလာပါပြီနော်
မေလ (၁) ရက်နေ့ကနေ (၃၀) ရက်နေ့အထိ INNI Skincare ပစ္စည်းများအားလုံးကို (20%) promotion ပေးမှာနော်
ကဲ နောက်ထပ်အစီအစဉ်လေးက INNI Skincare ၀ယ်ယူသူအတွက် INNI page လေးကို Like လုပ်ပြီး ဒီ promotion post လေးကို share ရုံနဲ့ INNI ရဲ့  လူကြိုက်အများဆုံး Lip Balm လေးကို ရရှိနိုင်မယ့်အပြင် INNI Skincare ရဲ့  Quiz တွေ ဖြေဆိုမယ်ဆိုရင် Lip Balm နဲ့အတူ နောက်ထပ် (10% ) Discount ရရှိနိုင်မယ့် May လရဲ့  Special Promotion တွေမို့ INNI ချစ်သူအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေရှင်
City Care Monthly Promotion
Bonus of the month and personal care promotion
City Care is running its Bonus of the month and personal care promotion from 26th to 25th every month. Health supplement, Beauty care items, Health monitors, Vitamins, Minerals and other health care products of over 24 items are on that bonus of the month and personal care promotion every month. Come to our City Care store which products you need are on our promotion and let us beatrusted and reliable partner for your well-being.
Hydration Bundles on Sales
INNI by La Source ရဲ့ January Promotion “Hydration Bundles on Sales”
ရာသီဥတုခြောက်သွေ့တာကြောင့် Hydration Bundles လေးတွေ Promotion လုပ်ပေးမယ်နော်။
အောက်ပါ Bundles လေးတွေကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလျော့ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Bundles လိုက်ဝယ်မှတော့ ရမယ်နော်။
🍀Hydration Bundle No 1. 180000 Kyats Only (30% Discount လျော့အပြီးဈေးနှုန်း)
1. Healing & Hydrating Body Lotion
2. Youthful Glow Hydration Toner
3. Soothing Hydration Cream
4. Hyaluronic B5 Gel
🍀Hydration Bundle No 2. 250000 Kyats Only (30% Discount လျော့အပြီးဈေးနှုန်း)
4. Intensive Repair Gel
ဒီလကုန်အထိပဲ ရရှိမယ့် Promotion လေးမို့ INNI ဆိုင်များမှာ အမြန်ဆုံးလေး ၀ယ်ယူလိုက်ကြရအောင်နော်။
အေးမြခြောက်သွေ့တဲ့ ဆောင်းတွင်းမှာလဲ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေနော်။